Umehluko phakathi kokuhlaziywa kwezobuchwepheshe nokuyisisekelo | Ezezimali Zomnotho
Umehluko phakathi kokuhlaziywa kwezobuchwepheshe nokuyisisekelo
Noma ngubani ozotshala imali yakhe ezimakethe zezimali kuyodingeka ukuthi abheke okungenani okunye kwalokhu amasu ekutshalweni kwezimali. Kuphakathi kokuthi kusekelwe ekuhlaziyweni kwezobuchwepheshe noma, kunalokho, ekuhlaziyweni okuyisisekelo. Ziyizinhlelo ezihluke ngokuphelele kepha lokho kungagcwaliswa. Kunoma ikuphi, kungamaphuzu amabili okusekela onawo okwamanje ukuvula noma ukuvala izikhundla ezimakethe zamasheya. Akumangalisi ukuthi bazokunikeza ukuphepha okukhulu ekusebenzeni kusukela manje. Okungukuthi, ngemuva kwakho konke, ngabe imayelana nani.
Njengoba kungenzeka wahlangabezana nakho eminyakeni yakho embalwa noma eminingi yokutshalwa kwezimali, kukhona iphrofayili yabasebenzisi abakhetha ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe kunokuyisisekelo noma okuphambene nalokho. Njengabalamuli bezezimali, bakhetha uhlelo olulodwa noma olunye lokuhlaziya, ngokuya ngezinto eziza kuqala kubo. Ngokomthetho, akukho ukuhlaziywa okungcono noma okubi kakhulu ukwedlula enye. Uma kungenjalo, kunalokho, zisuselwa emaqinisweni ahluke kakhulu. Ngalo mqondo, kubaluleke kakhulu ukuthi uchaze ukuthi iziphi izifiso zakho ukukhetha ukuhlaziywa okufanele futhi okulungile kakhulu.
Uma ubheka izinkundla zokutshala imali ezidijithali uzobona ukuthi abahlaziyi abaningi basebenzisa ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe ukwenza okwabo izibikezelo zemakethe yamasheya noma ezinye izimpahla zezimali. Lokhu kungenxa yokuthi kulula kakhulu ukubhekela lezi zincazelo hhayi imininingwane eyisisekelo yezinkampani ezibalulwe, ngakolunye uhlangothi, ezidinga ukulungiswa okukhulu emkhakheni wezamabhizinisi futhi ngalokhu kuphela ochwepheshe kuphela abangafeza le misebenzi ekhethekile. Okwamanje, inhloso yakho enkulu kufanele kube ukuthi zombili izinhlelo zokuhlaziya ziqukethe ini.
1 Ukuhlaziywa kobuchwepheshe: bona umzuzu
2 Siza ukuthenga
3 Umkhuba wesitoko
4 Ukuhlaziywa okuyisisekelo
5 Izintengo zokwabelana eziqondiwe
Ukuhlaziywa kobuchwepheshe: bona umzuzu
Eyokuqala yezinhlelo zokuhlaziya, futhi akudingeki ukuthi ibaluleke kakhulu, yilokho okubizwa ngokuthi ubuchwepheshe. Yebo, ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe ngokuyisisekelo kuqukethe ukuthola ukuthi siyini isimo sangempela samasheya noma ezinye izimpahla zezezimali. Akumangalisi ukuthi kusekelwe kufayela le- isifundo sezenzo zemakethe, ikakhulukazi ngokusetshenziswa kwamagrafu, ukuze ubikezele ukuthi ukuziphatha kwayo kuzoba njani phakathi nezikhathi zokuhweba ezilandelayo. Njengomphumela walesi sici esibalulekile, akungabazeki ukuthi uhlelo oluhle kakhulu lokwazi ukuthi yiliphi izinga lokungena nokuphuma elikhona kunoma yiziphi izimakethe zezimali.
Ukuhlaziywa kobuchwepheshe kusetshenziswa ngaphezu kwakho konke ekusebenzeni kwesikhashana futhi kubaluleke kakhulu ekulungiseni amanani. Kokubili ekusebenzeni kokuthenga nokuthengisa. Lokhu ngumehluko omkhulu ekuhlaziyweni okuyisisekelo. Ukuze uthole imininingwane ahumushe lezi zinyathelo Ngeke ube nokuzikhethela ngaphandle kokuzibona ngeso lengqondo ngokusebenzisa ihluzo. Lapho kumelwa khona izinhlobonhlobo zamanani, amazinga nezindawo ezizokusiza kangcono ukwazi ukuthi kwenzekani emalini. Ikakhulukazi ekunyakazeni okuhlose imigomo emifushane.
Ngaphandle kokungabaza, ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe kungukusekelwa okuhlukile kokuthi wenze ama-oda wakho wokuthenga. Phakathi kwezinye izizathu ngoba kuzokusiza ukwazi ngokuthembeka okukhulu okungukuthi i- izinga lentengo lapho kufanele ungene ezimakethe zezezimali. Uneziqinisekiso ezinkulu zokufeza lezi zinhloso ikakhulukazi uma uziqhathanisa nezinye izinhlelo zokuhlaziya eziyinkimbinkimbi kakhulu. Ukuthi ungagcina ama-euro amaningi emisebenzini ngayinye eyenziwa ngaphansi kwalolu hlelo oluyisisekelo. Yize kufanele futhi wazi ukuthi akuyona uhlelo olungenaphutha ngokuphelele. Hhayi kancane.
Vele, awunakuzikhethela ngaphandle kokufunda okuthile ngale ndlela yokuhlaziya. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa okuyisisekelo, njengoba ungacabanga kwasekuqaleni. Kunoma ikuphi, imininingwane ethathwe ekuhlaziyweni kwezobuchwepheshe izokushiya ulungele ngokwengeziwe ukuze ukwazi ukuthuthukisa eyakho imisebenzi yokuthenga nokuthengisa kusuka manje. Kuze kube seqophelweni lokuthi bazokutshela ukuthi yimaphi amanani amahle kakhulu okwamanje nokuthi kufanele uvule izikhundla kuwo. Noma okuphambene nalokho, uma isikhathi esifanele sokuhlehlisa izikhundla. Baphinde bakutshele uma ukuphepha kuthengwe ngokweqile noma kubekwe ngaphezulu, ngokwesibonelo.
Kepha uma ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe kubonakala ngento ethile, kungamandla ayo aphezulu okubikezela. Lokho, kukhombisa ukuthi yini i- ukuthambekela kwangempela kwezokuphepha, umkhakha noma inkomba yesitoko. Uma i-bullish, i-bearish noma i-lateral. Hhayi ngeze, kuzobe kukunikeza imininingwane ebaluleke ngokukhethekile ukuze ukwazi ukuthatha izinqumo zakho ezimakethe zezimali. Ngomqondo othile noma omunye, njengoba kunengqondo ukucabanga ngale ndlela yokutshala imali. Ngale ndlela, uzobe udlala ngenzuzo ethile uma imisebenzi yenziwa ngezikhathi ezimfushane zaphakade.
Ngakolunye uhlangothi, ingadalula futhi i- ukuqina kokunyakaza. Okusho ukuthi, uma bezofushane ngobude besikhathi noma uma, kunalokho, banohambo olunamandla kusuka kulezo zikhathi. Ngokwalo mbono wokuhlaziywa, kungashiwo ukuthi uchwepheshe ukusekela okunengqondo kakhulu kuwe ukuthi ufeze izinqumo zakho ngesiqinisekiso esikhulu sempumelelo. Ngakho-ke cabanga izinkulungwane nezinkulungwane zabatshalizimali abancane nabaphakathi abakhetha ukuthi lolu hlelo lulungiselele futhi luphathe izimali zabo. Ngandlela thile, uhlelo lokuthi utshale imali emakethe yamasheya ngaphandle komqondo. Njengoba kuzokwenzeka kuwe ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa.
Okunye ukuhlaziywa okuhluke kakhulu yilokho okuyisisekelo ngoba kuleli cala okubhekwayo yibhizinisi lebhizinisi lenkampani esohlwini. Ngoba empeleni, ukuhlaziywa okuyisisekelo kungaphezu kwendlela ethile yokuhlaziywa kwemakethe yamasheya, futhi lokho kuhlose ukukwenza nquma inani langempela lokuphepha noma isenzo, esibizwa ngenani eliyinhloko. Ngemininingwane efanele enjalo, njengesikweletu sayo, inani lebhuku noma ezinye eziningi ezibonisa isimo senkampani esohlwini lwezimakethe zezimali. Kodwa-ke, wukuhlaziywa okuyinkimbinkimbi kakhulu njengoba uzobona kulezi zikhathi eziqondile.
Ngoba lolu hlelo olusetshenziswa esikhwameni luningi kokutholakala imiphumela yebhizinisi hhayi ekuthambekeni kwezenzo zabo. Akuhlangene ngalutho nomunye, noma kunjalo kuyimininingwane ongayigcwalisa ngokuphelele kusukela manje kuqhubeke. Ukufika ezingeni lokuthi bazonikeza ukuphepha okuningi kakhulu ekusebenzeni ngakunye okwenzayo. Kunoma ikuphi, kufanele ukhumbule ukuthi lolu hlelo lokuhlaziya ludinga ulwazi oluningi kunalolo lobuchwepheshe. Akubona bonke abatshalizimali abazoba sesimweni esifanele sokuhumusha idatha enikezwe yilokhu kuhlaziywa okuphelele.
Izintengo zokwabelana eziqondiwe
Ngokungafani nokuhlaziywa kwezobuchwepheshe, kulokhu kusiza kakhulu ekusebenzeni ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokuvuthwa. Lapho ungagcina khona imali oyitshalile ifinyelela imigomo oyifunayo ngaso sonke isikhathi. Ukusuka kuleli phuzu lokubuka, awukwazi ukungahambi kahle uma uthi ukuhlaziywa okuyisisekelo kuphelele kakhulu kunezobuchwepheshe. Yize into eyinkimbinkimbi kakhulu ukuthi ungayitolika kahle. Akumangalisi ukuthi enye yezinkinga ezinkulu ukusetshenziswa kwayo kufaka ukuthi ungenza iphutha ngakho-ke wenze eminye imisebenzi emakethe yamasheya engaba yingozi kakhulu kuzintshisekelo zakho noma zobungcweti. Lesi ngesinye sezingozi ezinkulu ongaba nazo ngokusetshenziswa kwalolu hlelo olukhetheke kakhulu.
Hhayi ngeze, awukwazi ukukhohlwa ukuthi lena indlela ezama ekugcineni ukubala inani langempela lokuphepha. ngokuhlaziywa kwebhalansi bese uyiqhathanisa nenani lemakethe. Ngakho-ke ngale ndlela, usesimweni esihle sokuveza ukuthi intengo yamanye amasheya ishibhile noma ayabizi. Ngoba ngalolu hlelo, abalamuli bezezimali banikela imininingwane ebaluleke njengenani lentengo lamasheya futhi avuselelwa ngezikhathi ezithile. Kunoma ikuphi, ucezu lolwazi olukusizayo ukuthi wazi ukuthi angakanani amazinga amasheya enkampani.
Njengoba ubonile, ziyizindlela ezahlukahlukene ezingasetshenziswa ngokuya ngephrofayili oyivezayo. Kepha futhi maqondana nolwazi okufanele uluhumushe ngakunye kwalokhu kuhlaziywa okubili. Akumangalisi ukuthi kuyinto lapho amathuba abatshalizimali abancane nabaphakathi angahluka khona. Ngoba akumangazi ukuthi abanye abasebenzisi bakhetha indlela eyodwa kanti abanye bakhetha okunye. Ekugcineni, into okufanele uyicabangele ngalesi sikhathi, zombili izihlaziyo ziyizindlela zokwenza ukonga kube nenzuzo ngeziqinisekiso ezinkulu zempumelelo. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa ekuchazeni amasheya ezimakethe zamasheya futhi leyo ngenye yezinjongo ezinkulu zokutshala imali emakethe yamasheya.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Umehluko phakathi kokuhlaziywa kwezobuchwepheshe nokuyisisekelo
U-Adriel rodriguez kusho
Ngakuqonda ukuthi ukuhlaziywa okuyisisekelo kungokwesiko kakhulu, ulwazi ulusingatha kahle kakhulu, ngiyabonga ngokucacisa ukungabaza, manje senginolwazi oluningi ngakho konke, kufanele sithathe izeluleko kochwepheshe. Njengamanje, sinomhwebi osemusha ogama lakhe linguFernando Martínez Gómez-Tejedor, okhombise amasu akhe amahle kakhulu kwezamabhizinisi nasemkhakheni omuhle njengomuntu.
Phendula u-Adriel Rodriguez
Izincwadi ezingcono kakhulu zokushintshanisa amasheya
Thengisa manje ukuze uqale kabusha utshalomali ngemuva kweholide